နံပါတ် ၁ သတင်းအတွက်ဆုပေးခြင်း Reward ဖောင်ဒေးရှင်း - အချစ်၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ အမှတ် 1 အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောသတင်းများ
Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှာအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က Rewarding News ကိုသုံးလတစ်ကြိမ်ထက်တစ်နှစ်ခြောက်ကြိမ်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတတ်နိုင်သမျှ tweet များပြုလုပ်ပြီးအပတ်စဉ်သတင်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ငါတို့ကိုဖုံးကွယ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိရင်မင်းပြောပါ ဦး ။ တုံ့ပြန်ချက်အားလုံးကို Mary Sharpe မှကြိုဆိုပါသည် mary@rewardfoundation.org.
ဒီ edition အတွက်
"Apple, Google, Facebook က? သူတို့က "အခြေခံအားမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်နေကြသည်
နှုတ်ဆက်, ဒါကြောင့်ကြာမြင့်စွာ ...
Porn နှင့်အထီးကျန်ခြင်းအကြား Link ကို
PSHE အပေါ်စကော့တလန်ပါလီမန်ပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု '' စက္ကူ
သတင်းများ, VIEWS နှင့်အင်တာဗျူး
အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှကတစ်ဦးထံမှဆုလက်ခံရရှိကြောင်းကြေညာဖို့ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ် အကြံပြုချက်များခုနှစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကြီးထီရန်ပုံငွေအဖွဲ့စီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကို '' က-အဘယ်သို့မိန့်--on-the-ဖြူ '' ခေါင်းစဉ်ရှိပါတယ် စကော့တလန်လူငယ်များထဲမှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်၏ပွားပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း။ ရည်ရွယ်ချက်မှာကျောင်းများအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လူမှုရေးကျန်းမာရေးပညာရေး (PSHE) ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များရေးဆွဲရန်ဖြစ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၊ ဆုံတွေ့မှု၊ ဆက်ဆံရေးနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုများအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ ဦး နှောက်ကိုအလွန်အကျွံလှုံ့ဆော်ရန်စွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုစွန့ ်၍ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်တည်ဆောက်ရန်နည်းလမ်းများကိုလည်းညွှန်ပြပါမည်။ ပျော်စရာကောင်းသော၊ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်နှင့်အသက်အရွယ်အလိုက်သင့်လျော်သောအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုတီထွင်နိုင်ရန်အတွက်ဆရာအနည်းငယ်နှင့်ကျောင်းသားအနည်းငယ်၏စွမ်းရည်များလက်ထဲရှိနေခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းသာပါသည်။
ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Read ဆောင်းပါး Facebook မှာစာသားသင့်ဦးနှောက်ကြိုးကိုင်နေသည်ဘယ်လို။ Tech မှအတွင်းကြီးတွေယောက်ျားလေးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲဆောင်ပြန်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်များ၏အားသာချက်ယူဘယ်လိုထွက်ခေါ်ဆိုပါ။ သူတို့ဟာဘီလီယံအောင်ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်, စိတ်ဓာတ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အသက်တာနှင့်အတူမကျေနပ်တက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကဗီဒီယိုအင်တာဗျူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုနှင့်အတူအလုပ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့လာမယ့်တက်-and ငယ်ရွယ်သရုပ်ဆောင်စကော့တလန်၏ရော်ဘီဂေါ်ဒွန်နှင့်အတူလူသစ်တွေကိုပြု၏ အံ့သြစရာတွေ့ကြုံပြဇာတ်ရုံကုမ္ပဏီနှင့်ခရစ်ယာန် McNeill ကနေတစ်ခုဖှယျခံနိုင်ရည်နည်းပြနှင့်အတူ ကောင်းစွာ၏ elements။ ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုတည်းဖြတ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခြင်းရဲ့နှေးကွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့စတင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်မှာလာမည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဤအင်တာဗျူးအချို့ကိုရရှိရန်ဖြစ်သည်။ သူတို့အွန်လိုင်းမှာရှိရင်ကျနော်တို့ tweet ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့လို့ခေါ်တဲ့အစွမ်းထက်တဲ့စာအုပ်အကြံပြုချင်ပါတယ် ကိုယ်ပိုင်သနားကြင်နာခြင်း - ကိုယ်သင် Up ကိုရိုက်နှက် Stop နှင့်နောက်ကွယ်မှာ Insecurity Leave လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု Kristin Neff ၏ပါမောက္ခဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Kristen ညီလာခံမှာသူမ၏စာအုပ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအကြောင်းပြောဆိုကြားသဘောကျနှစ်သက်ကြသည်။ သူမသည်ကိုယ့်သီအိုရီမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အသက်တာ၌အချို့သောအစစ်အမှန်ပြဿနာများကိုကျော်လွှားရန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစာအုပ်စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်တစ်ဦးဖိအားပေးခံရနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ယဉ်ကျေးမှုနေထိုင်အတူပါလာသည်ဟု Self-ဝေဖန်မှုများတိုက်ဖျက်ရေးများအတွက်အစွမ်းထက်ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ ကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အခမဲ့လည်းရရှိနိုင်အသံ downloads, ရှိပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်အသုံးဝင်သောစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
TRF ကယခုနှစ် Napier တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားနှစ် ဦး ဖြစ်သည့် Jamie Wright နှင့် David Martin တို့ကိုနှုတ်ဆက်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနေတယ်၊ ​​အဲဒါကသူတို့ကိုအသုံးဝင်တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရစေမယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်နောက်အဆင့်မှာသူတို့ကိုကံကောင်းပါစေ။
ဘယျအရာ THE BOFFINS အကြောင်းကိုပြောဖူး ...
ယခုရှိပါသည် သက်သေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ၏ထိုးနှက်မှုကိုခံရခြင်းသည်အခြားသူတစ် ဦး ဦး သို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုထိုးနှက်ခြင်းထက် ပို၍ သာယာသည်။ လေဖြတ်ခြင်းကနှလုံးခုန်နှုန်းကိုနှေးစေသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက် NHS သည်ဤအချက်သည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အရာများနှင့်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားသည်။ ကြည့်ပါ ဒီမှာ နှောင်ကြိုးအပြုအမူ၏မှော်အကြောင်းပိုမိုဖော်ပြထားသော "ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌နေရန်ပျင်းရိလမ်း" ဟုခေါ်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါးအတွက်။
ဘယ်ဟာအရင် porn သို့မဟုတ်အထီးကျန်လာသလဲ ဤသည်၌ သုတေသနလုပ်ငန်း အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူများသည်အထီးကျန်မှုကိုပိုမိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပြီးအထီးကျန်မှုကိုကြုံတွေ့ရသူများသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်စေမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသောသုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည်။
စုံတွဲများအပေါ် porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ ဒီမှာကောက်နုတ်ချက်အချို့ရှိပါသည် အရေးကြီးသောလေ့လာချက်အသစ် ရှင်ပေါလုဂျေ Wright ကဦးဆောင်:
"လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားပူးပေါင်းမှညစ်ညမ်း သာ. နှစ်သက်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး devaluing နှစ်ဦးစလုံးလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့သညျ။ "
"ဒီကပိုမကြာခဏညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေတစ်ခု arousal tool ကိုအသုံးပြုသည်လိင်စိတ်နိုးထ၏အခြားသတင်းရပ်ကွက်များကဆန့်ကျင်သည်အတိုင်း, ပိုပြီးတစ်ဦးချင်းညစ်ညမ်းမှ conditional ဖြစ်လာပေမည်။ "
"ကျနော်တို့ကဒီထက်ယောက်ျားမိန်းမတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေး, သူတို့ကအစီရင်ခံတင်ပြနည်းဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုတန်ဖိုးထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ "
ဧပြီလ 2017 ခုနှစ်တွင်စကော့တလန်အတွက်လက်စားချေ porn အပေါ်သစ်ကိုဥပဒေအောက်မှာအင်အားစုသို့ကြွတော်မူ ကြမ်းတမ်းအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုအက်ဥပဒေ 2016. ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းသို့မဟုတ်ရငျးနှီးသညျ့ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုထုတ်ဖော်ရန်ခြိမ်းခြောက်များအတွက်အများဆုံးပြစ်ဒဏ်5နှစ်ပေါင်း '' ထောင်ဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ဦးကိုဝတ်လစ်စလစ်သို့မဟုတ်မှသာအတွင်းခံထဲမှာတစ်ခုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်အတွက်စေ့စပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်းရှိရာပုဂ္ဂလိကအတွက်သိမ်းယူပုံရိပ်တွေပါဝင်သည်။ ဆက်ဖတ်ရန် ဒီမှာ.
အဆိုပါစကော့တလန်ပါလီမန်ရဲ့ပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကော်မတီကပဲလိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးပညာရေးအပေါ်အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေထားသည်။ ကျောင်းသားများသူတို့သင်ခန်းစာတွေဇီဝဗေဒကျော်လွန်သွားနှင့်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းကိုပိုမိုပြောဆိုရန်ချင်ကြောင်းပြောကြသည်။ အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှဖြေရှင်းချက်အထောက်အကူပြုရန်ကြိုးစားနေပါကြောင်းနေကြသည်။ အဆိုပါ Big ထီရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကနေချီးမြှင့်ကိုအောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ ကော်မတီရဲ့စက္ကူပေါ်မှာ (အထကျကိုကွညျ့ပါ) နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
မူပိုင်ခွင့်© 2018 အဆိုပါဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်း All rights reserved ။
သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website www.rewardfoundation.org မှာရွေးချယ်ကြောင့်ဤအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိထားပါသည်။
သင်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့ဦးစားပေးကို update or ဒီစာရင်းထဲကနေနှုတ်ထွက်